‘लकडाउन हुँदैनथ्यो भने उनी यतिबेला हङकङ पुगिसकेका हुने थिए सायद,’ पौडेलले भने। – Sanchar Patrika
उनी मधुमेहका बिरामी थिए। उनलाई आइसोलेसनमै राखेर अस्पतालका चिकित्सकले निगरानी गरिरहेका थिए। शनिबार राति साढे ११ बजे उनको निधन भएको निर्देशक अचार्यले बताए।उनी पोखरास्थित घरमा एक्लै थिए। उनका श्रीमती र २ छोरी हङकङमा छन्। उनी पनि हङकङ जाने तयारीमा रहेको पोखरा-१९ का वडाध्यक्ष शोभामोहन पौडेलले बताए।
‘लकडाउन हुँदैनथ्यो भने उनी यतिबेला हङकङ पुगिसकेका हुने थिए सायद,’ पौडेलले भने।एक्लै बसेका उनले घरमै सच्चाइ चलाएका थिए। सच्चाइमा विभिन्न धर्ममा आस्था राख्ने मानिसहरू जम्मा भएर भजनकिर्तन गर्ने गर्छन्। बिरामी हुनुभन्दा अघिसम्म पनि उनले घरमै सच्चाइका अनुयायीलाई बोलाएर भजनकिर्तन गर्थे। सच्चाइका प्रमुखकै भूमिकामा काम गरेका उनलाई कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि उनको सम्पर्कमा आएका अरूको पनि स्वाब परिक्षण गरियो।
Prevनेकपाभित्र पाँच गुट ; को कति बलियो?
Nextऐश्वर्या राय बच्चनकी छोरी आराध्या बच्चनले लिएको आनलाइन भिडियो भयो भाइरल
नेपालमा कोरोनाको ‘एक्टिभ केस’ कति ? (सूचीसहित)